स्टोर | भिसा + वर्क + प्रवासीहरूको लागि CV सेवाहरूको साथ
स्टोर - दुबई शहर कम्पनी
भिसा + वर्क + CV सँग एक्स्पेट्सको लागि स्टोर गर्नुहोस्। कृपया तपाईको लागि आदर्श गन्तव्य छनौट गर्नुहोस्। हामीसँग हजारौं विदेशीहरू बोल्दै गरेको जस्तो देखिन्छ भारत साथै पाकिस्तान र साउदी अरेबिया। हामी अब ती सबैको लागि अचम्मको सेवा प्रदान गर्दैछौं। त्यसो भए दुबई शहर कम्पनीले तपाईंको लागि के गर्न सक्दछ कृपया हेर्नुहोस्। एक एक्सप्याटको रूपमा, तपाईसँग काम पाउन विस्तृत जानकारी हुनुपर्नेछ। जबकि, दुबई शहर कम्पनी प्रदान गर्दै Expats को लागी गाइड। तल हाम्रो भिसा सँगै कामको साथ र पाठ्यक्रम रोजगार बीमा सेवाहरूको साथ छ।
हामीलाई आशा छ कि तपाईले आफ्नो आदर्श देश छान्नुहुनेछ। हाम्रो सूची मा, तपाईं बस्ने र एक विदेशी को रूप मा काम को लागी एक शीर्ष मूल्या rated्कन गंतव्य हुनेछ। त्यसो भए, उदाहरणको लागि, तपाईं जोर्डनका साथै साउदी अरेबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अधिराज्यमा बसाउन सक्नुहुन्छ।
हाम्रो स्टोर कसरी प्रयोग गर्ने?
तपाईंले बस्नको लागि आफ्नो उत्तम देशको बारेमा सोच्नु पर्छ। त्यसोभए तपाईंले आफ्नो भिसा छनौट गर्नुपर्नेछ र तपाईं हाम्रो टोलीबाट सेवाहरू खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसोभए सकारात्मक पक्षमा, हाम्रो टीमले तपाईंको स्थान परिवर्तन प्रक्रियाको ख्याल राख्छ। त्यसोभए, तपाइँले हाम्रो कम्पनीबाट भिसा छनौट गर्नुपर्नेछ। त्यसोभए दुबई सिटी कम्पनी विशेषज्ञहरु को समूहले संयुक्त अरब अमीरातमा तपाईलाई प्रवासी बनाउनका लागि बाँकी आवश्यक कार्यहरू गर्दछ।
मध्य पूर्व को लागी भिसा
दुबई शहर कम्पनीको साथ मध्य पूर्वमा भिसा। त्यसोभए सामान्यतया बोल्ने तपाईंसँग मध्य पूर्वमा सबैभन्दा उत्तम र सामूहिक रूपमा लोकप्रिय देशहरू मध्ये एकमा आमन्त्रित हुने विकल्प हुन सक्छ। हाम्रो कम्पनीले विदेशी कामदारहरूलाई कुवेत, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स लेबनान र प्यालेस्टाइनमा पनि काम पाउन मद्दत गरिरहेको छ। त्यसैले सामान्यतया बोल्दै यदि तपाईं एक सबैभन्दा लोकप्रिय देशहरू मध्ये एक भिसा प्राप्त गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ र कामका लागि सबै भन्दा राम्रो ठाउँहरू मध्ये एक र तपाईंको परिवार र तपाईंको मानौं। तपाईंसँग दुबईको साथ रोजगारीको अवसरलाई लिन विकल्प छ।
मध्य पूर्व मा काम! आज पुन: स्थानान्तरण गर्नुहोस्!
त्यसोभए, यदि तपाईं एक विदेशी कामदार हुनुहुन्छ र तपाईं मध्य पूर्वमा राम्रो रोजगारीको अवसर खोज्दै हुनुहुन्छ भने। दुबई शहरको कम्पनीले पाकिस्तान साउदी अरेबियाका मानिसहरूलाई सहयोग गरिरहेको छ। यसबाहेक, दुबई र पनी विदेशी देशहरू जस्तै कुवेत र लेबनान। हामी सबैलाई सँगै मद्दत गरीरहेका छौं रोजगार प्रबन्धक रोजगारहरू र निलो-कलर रोजगारहरू प्राप्त गर्न र कब्जा गर्न। त्यसोभए हामी यहाँ छनौंमी तपाईलाई छान्नु भएको देशमा भिसा अवसरहरू प्रदान गरेर सफल रोजगार खोजीकर्ता बन्नको लागि सकेसम्म मद्दत गर्नका लागि छौं। तपाईसँग शीर्ष-मूल्या rated्कन गरिएका देशहरूबाट छनौट गर्नको लागि विकल्प हुन्छ जुन एक्स्पिट्स भाडामा लिइन्छ।
हामी दुबई वा अबु धाबीमा तपाईलाई भेट्ने आशा राख्दै छौं। र यो हाम्रो मुख्य देश हो जहाँ हामी तपाईंलाई राख्न र भिसा दिन सक्छौं।
तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको भिसाको अर्डर मात्र हो। त्यसपछि तपाईंको भिसा कार्टमा थप्नुहोस्। त्यसोभए भुक्तानी गर्नुहोस्। र त्यसपछि तपाईंको छनौट गन्तव्यमा उडान गर्नुहोस्। त्यो सबै एक सफल नौकरी खोजीकर्ता बन्छ।
अरू केहि पनि तपाईंलाई आवश्यक हुन सक्छ (97)
दुबई स्मृति चिन्ह (76)
कार्य खोजी गर्दै (1)
मुस्लिम कपडा (158)
यात्रा बैग लग्गेज र सुटकेस (264)
मध्य पूर्व को लागी भिसा (15)
कामको लुगा (38)